Famoahana andiam-pianatra avy ao amin’ny ETP | GAZETY_ADALADALA
Famoahana andiam-pianatra avy ao amin’ny ETP
Posted on 18/07/2012 by gazetyavylavitra
Nosy i Madagasikara, ary raha vao hoe ‘nosy’ no heno dia fitokana-monina no mba ao an-tsaina. Tsy hoe rehefa nosy koa anefa dia tsy ho afaka amin’izay fatotry ny fitokana-monina izay. Ho amin’izany indrindra no ilàna ny fianarana teny vahiny samihafa, mba hahafahana mifandray amin’ny any ivelany. Tafiditra amin’izany ny ezaka ataon’ny ETP (English Teaching Program).
Toeram-pianarana teny Anglisy araka izany ny ETP, izay tany amin’ny 1962 no nananganan’ireo mpampianatra Amerikana azy ho fanampiana ireo olona hafa tsy miteny azy io ho afaka kosa mifanerasera amin’ny alàlany, ka 10 herinandro no faharetan’ny telovolana iray ao aminy, ianarana mandritra ny 60 ora isaky ny antsoina hoe ‘level’ na dingana iray. Manana efitrano miisa 13 izy ho entiny manatratra izany tanjona izany.
Isan-telovolana dia misy mpianatra eo amin’ny 1300 eo ho eo no voasarika hianatra teny Anglisy ao amin’ity ivon-toerana iray eto Antananarivo ity.
Androany ary, dia mpianatra niisa 113 no notolorana mari-pankasitrahana teny amin’ny masoivoho Amerikana Andranomena. 74 tamin’izy ireo no tafiditra amin’ny fanasokajiana azy ho sangany. Ny Mpanolotsaina momba ny asa koltoraly eo amin’ity masoivoho ity no nitarika ny fotoana.
Tonga nanome voninahitra sy namporisika ny vao avy notolorana mari-pankasitrahana mba hitozo hatrany ihany koa ny filohan’ny AmCham, Atoa Zouzar Bouka. Tamin’ny fandraisany fitenenana no nilazany fa raha ny marina dia tsy tapitra hatreo ny fianarana, fa eo vao tena manomboka. Ny AmCham dia American Chamber, manao fihaonana matetika amin’ireo mpandraharaha eto an-toerana ry zareo ary misy fotoana anasàny ihany koa ireo solotenan’ny masoivoho vahiny mandritra ny tafatafa ataony. Nanamarika moa ity mpitarika ity, fa matoa tsy mbola misy mpanao gazety nahazo fanasana hanatrika ireny tafatafan-dry zareo ireny, dia satria mahatsiaro ho mahazo aina kokoa ireo mpandray anjara rehefa miresaka tsy eo anatrehan’ny mpanao gazety (???)
Atoa Tovo Herifidy RAFELIARISOA no nandray fitenena nisolo tena ireo mpianatra marobe, nisaotra ny ETP sy ny masoivoho tamin’izao fampianarana sy fandraisana ary fikarakarana azy ireo izao. Hoy indrindra izy:
we all know the Malagasy proverb that says “If a tree has been turned into a boat, it’s because it was planted in a good soil” So on behalf of the graduates, I would like to thank all the teachers and staff members at the ETP without whom this would not have been possible.
You showed a lot of patience and dedication to help us learn English in the best conditions and for that we are grateful
Fantatsika rehetra ilay ohabolana Malagasy manao hoe: « Ny hazo no vanon-ko lakana, ny tany naniriany no tsara ». Noho izany, amin’ny anaran’ireo rehetra nahazo maripahaizana, tiako ny hisaotra anareo rehetra mpampianatra, ny mpandraharaha mpikambana ao amin’ny ETP izay raha tsy nisy azy anareo tsy ho nisy izao rehetra izao.
Nampiseho faharetana sy fahavononana betsaka ianareo hanampy anay hianatra ny teny Anglisy ao anatin’ny fepetra tonga lafatra ary mankasitraka azy rehetra ireny izahay.
Hifindra eny Tanjombato ny ETP, ao anatin’ilay foibe Amerikana vaovao ary hisy tolotra marobe ho an’ny daholobe izay maniry hianatra teny Anglisy ampiasàna ny teknolojia avo lenta. Misy ny fampianarana manaraka ny fomba mahazatra ary misy ny fampianarana misy fifamatorana, ny fampianarana ho an’ny mpanao bizna, ny natokana ho an’ny mpianatry ny lisea, ny natokana ho an’ny ankizy, ny kilasy natokana ho an’ny resaka sy fomba fanonona, ny kilasy fanomanana ny TOEFL, SAT, LSAT, GRE, TOIEC, TELP , ka arakaraky ny valin’ny sivana atao no kilasy ametrahana ny tsirairay hoy Ramatoa Vony RAZANADRAKOTO talen’ilay ivon-toerana.
Amin’ny hoavy dia hisy ny fampianarana amin’ny alalan’ny finday, na dia tsy hialana aza ny fomba natao hatrizay, toy ny ifanatrehana na ny anaty efitrano. Tokana ny tanjona, ny hahaizan’ireo mpianatra ao aminy mampiasa ny teny Anglisy.
Karazan’olona maro no mianatra ao amin’ity ivon-toerana iray ity, ary anisan’ireo notolorana maripahaizana androany ny namana iray mpitoraka bilaogy Ariniaina. Isan’ny omen’ny ao amin’ny ETP sy ny Masoivoho ny toerany tokoa mantsy ny bilaogera tato anatin’ny volana vitsivitsy, raha mbola tsinontsinoavin’ny sehatra hafa kosa.
Filed under: Antanananrivo miblaogy, fampianarana, fety sy fankalazàna, fiaraha-monina, fifandraisana iraisam-pirenena, haino amanjery, tapatapany | Tagged: #ETP, #GRE, #LSAT, #SAT, #TELP, #TOEFL, #TOIEC, Andranomena |
« POWER BALANCE – FITAKA BEVAVA Fanafihana ny toby #RFI #Ivato 22 Jolay 2012 »